Amakhadi Abakhiqizi - Amakhadi AseChina Abahlinzeki Nefektri
Ikhadi le-epoxy le-RNFC / RFID / izitika zomphakathi
Ikhadi le-RFID epoxy libhekisela ku-chip ye-RFID efakwe ekhadini eliqediwe le-epoxy. Ikhadi le-epoxy lingama-transponders ahlanganiswe nengilazi ye-fiber fiber eqinisiwe. Ikhadi le-Epoxy linikeza ukusebenza okuvelele nokuqina ezimweni ezinzima zemvelo, futhi liyatholakala ngobuchwepheshe obudume kakhulu be-125 KHz no-13.56 MHz RFID chip.
Ubulungu / ikhadi lebhizinisi
Ikhadi lebhizinisi lengqondo lenziwe ngezinto ezibonakalayo eziyi-100% ezintsha ze-PVC futhi lilandela i-ISO 7816 yamazwe omhlaba jikelele noma ngomkhumbi noma umumo owenziwe ngokwezifiso.
Ikhadi le-Mind Barcode lenziwe ngezinto ezibonakalayo ezintsha ze-PVC eziyi-100% futhi lilandela i-ISO 7816 yamazwe omhlaba jikelele. Ibhakhodi, ikhodi ye-QR ingenziwa ngezifiso futhi sinikeza izinketho eziningi zokwenza kube ngokwakho.
Ikhadi elisobala lomqondo, ikhadi lebhizinisi elicacile, ikhadi elifriziwe lenziwe ngezinto ezibonakalayo eziyi-100% ezintsha futhi lilandela indinganiso ejwayelekile yamazwe omhlaba i-ISO 78116. Futhi kungenziwa ngosayizi nobukhulu.
Indawo yokunwaya kanye nobuningi bokubhala kanye nombala wokuqala / idayikhoni ingenziwa ngezifiso. Sinikeza izinketho eziningi zokwenza ngezifiso.